cw Archives - Nanmalgyi
Monterey Bay ရဲ့ ထူးခြားဆန်းကြယ်သော ပင်လယ်ထဲကမွန်းစတားများ
ကယ်လ်ဖိုးနီးယားပြည်နယ်ထဲက ဆန်ဖရန်စစ္စကိုနဲ့ ဆန်ဂျို့စ်ရဲ့တောင်ပိုင်းလောက်က Monterey Bay အတွင်းမှာရှိပါတယ်။ Monterey Bay ဟာ ပင်လယ်အော်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ မျိုးကွဲတွေအများကြီးရှိခြင်း၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေရှိခြင်း၊ သားရဲတိရိစ္ဆာန်ပေါများခြင်းတွေနဲ့ သဘာဝအလှအပတွေများပြားခြင်းက သုတေသနပညာရှင်တွေနဲ့ နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များကို ဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Monterey Bay မှာလည် မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ဆန်းကြယ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ […]
ကမ္ဘာကျော် ကော်တရာ ကပ်စေးနှဲကြီးများ
ဘီးစိတ်လို့ ခေတ်သစ်ဗန်းစကားမှာခေါ်ကြတဲ့ ကပ်စေးနှဲကြီးတွေဟာ နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေမှာပါ။စိစစ်တယ်ချွေတာတယ်ဆိုပေမဲ့ လိုတာထက်ပိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့စည်းစိမ်တွေကို တစ်ပြားမှမထွက်အောင် စိကုပ်နေတတ်တဲ့ ကပ်စေးနှဲကြီးတွေကတော့ လွန်တာပေါ့နော်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ စာဖတ်သူပရိသတ်တွေကို ကမ္ဘာကျော်ကပ်စေးနှဲကြီး ရှစ်ဦးအကြောင်းပြောပါချင်ပါတယ် ။၁။ကတ်သီးကတ်သတ်ကပ်စီးနည်းသူမီလျံနာသူဌေးကြီး ကိုယ်မမြင်ဖူးလိုက်တဲ့ကိုယ့်အဘေးကြောင့်အမွေတွေအများကြီးရလာတာမျိုးဟာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ဝယ်လင်တန်အာဘတ်ဟာ ၁၉၁၉မှာ အရမ်းလောဘကြီးတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်နေပါပြီ။ပိုက်ဆံတွေအများကြီးစုဆောင်းထားတဲ့အပြင် အဲ့ပိုက်ဆံတွေကို ပေးရမှာကြောက်လို့မိသားစုကိုတောင်မမြင်ချင်သူပါ။ဒါ့ကြောင့်သူ့သေတမ်းစာမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အချက်တစ်ခုကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ သူ့ရဲ့မြေးငယ် သေဆုံးပြီး […]
ကမ္ဘာပေါ်က အန္တရာယ်အရှိဆုံး အလုပ်ကိုင်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသူများ
12. ဓာတ်တိုင်တွေပေါ်တက်ပြီး ဓာတ်ကြိုးဆင်တာနဲ့ မီးအားဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ အလုပ်ဟာ အန္တရာယ်များပါတယ်။အမေရိကန်လို လုံခြုံရေးပစ္စည်းအပြည့်အဝပေးတဲ့ နိုင်ငံတောင် အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ 60000 လောက်သာ ရပေမယ့် ပြင်းထန်တဲ့ ဗို့အားတွေနဲ့ ရာသီမရွေးလုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာ ဓာတ်လိုက်သေဆု့းမှုများစွာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားပေါင်း 100000 မှာ 90 လောက် သေဆုံးမှု ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနဲ့ အဝှမ်းဆို […]
ကလီယိုပက်ထရာဟာ ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာနဲ့ စာအုပ်ပေါင်းများစွာရဲ့ အရှင်သခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကလီယိုပက်ထရာဆိုတာနဲ့ အမြဲတမ်းလှပပြီးတော့ sexy ကျတယ်။ ဆံပင်ပေါ်ကပုတီးလေးတွေနဲ့ အနက်ရောင်ခြယ်သထားတဲ့မျက်လုံးတွေက ဂျက်စပဲရိုးလိုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒါကိုက သူ့ရဲ့အမှတ်သညာတစ်ခုလို ဖြစ်နေတာမဟုတ်လား။ သူမနဲ့တစ်ခေတ်တည်းရှိခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်တော့ သူမဟာ မသေနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်လိုမျိုးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Julius Caesar ကတော့ သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ မသေမျိုးလို့ […]
တကယ့်ကြောက်စရာဖြစ်ရပ်တွေကို မှီငြမ်းထားတဲ့ ဒဏ္ဍာရီ၅ခု
လူသားစား၊ နှိပ်စက်၊ မဒိန်းကျင့်၊ လူသတ်မှုတွေဆိုတာက ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဖြစ်နေပါပြီ။ဒဏ္ဍာရီတွေဆိုတာက လူသားတွေရဲ့အသက်ရင်နေချိန်မှာ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုပါပဲ။ တချို့တွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းတွေကို ပြန်သတိပေးနေပါတယ်။ တချို့ကတော့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို သင်ပေးတယ်။ တချို့ကတော့ ကျောရိုးစိမ့်အောင် လုပ်နိုင်တယ်။ ရာစုနှစ်များစွာကြာအောင် တည်ရှိနေတဲ့အကောင်းဆုံး ဒဏ္ဍာရီတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီလိုကြောက်လန့်စရာကောင်းတဲ့ ဒဏ္ဍာရီတွေဟာ တကယ့်ဖြစ်ရပ်တွေကို […]
တင်ပါးချင်းဆက် ဟယ်လ်တန်ညီအစ်မရဲ့ သနားစရာဘ၀ဇာတ်ကြောင်း
ဟယ်လ်တန်ညီအစ်မရဲ့နာမည်တွေကတော့ ပဲရစ်နဲ့ နစ်ကီပါ။ အဲဒီနာမည်နဲ့ မကျော်ကြားခင်မှာတော့ သူတို့ရဲ့နာမည်တွေဟာ ဒေစီနဲ့ ဗွိုင်အိုလက် ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအမွှာတွေကို အင်္ဂလန် Brighton မြို့ရဲ့ ၁၉၀၈ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့အပြစ်တွေကို ဘုရားသခင်ကဒဏ်ခတ်တဲ့အနေနဲ့ အခုလိုမွေးဖွားလာတာလို့ ယူဆထားတဲ့ ဘားမယ် Kate Skinner ဆီမှာမွေးဖွားလာခဲ့တာပါ။ ကလေးတွေဟာ အဖေမပေါ်ဘဲမွေးလာခဲ့တာပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ […]
တရွာလုံးထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးမှုနှင့် အခြားထူးဆန်းသော အကြောင်းအရာများ
1. 1953 ခုနှစ်က Lieutenant Felix Moncla ဆိုသူဟာ မီချီကန် လေကြောင်းလိုင်းက တိုက်လေယာဉ်မှုးဖြစ်ပါတယ်။ F-89 Scorpion ဆိုတဲ့ လေယာဉ်ကို မောင်းနှင်ရပြီး သူတို့ဟာ ကင်းမြှီးကောက်စစ်ဆင်ရေးဆိုပြီး လှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လေပေါ်မှာ တနာရီကို မိုင်ငါးရာနှုန်းနဲ့ ပျံသန်းသွားစဉ်မှာ သူ့လေယာဉ်နဲ့ အနီးကပ်ဆုံးပျံသန်းသွားတဲ့ […]
ရှေးဟောင်းလောကရဲ့ အံ့ချီးဖွယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Colossus Of Rhodes ကြီး
The Colossus of Rhodes (Rhodes မြို့မှာတည်ထားတဲ့ ဂရိနေနတ်မင်းရဲ့ ရုပ်ထု) ကြီးဟာ ၅၄နှစ်လောက် တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ရာဇ၀င်တွေကတော့ အဲဒီထက်ပိုကြာရှည်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာသစ်ရဲ့ဝင်ပေါက်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ ရှေးဟောင်းလေဘာတီရုပ်ထုလိုပဲ ကမ္ဘာသစ်ရဲ့ဝင်ပေါက်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ ဟာ Mandraki ကျွန်းရဲ့ဆိပ်ကမ်းပေါက်ဝမှာ တည်ရှိပါတယ်။ မြို့ထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့သူတိုင်းကို စောင့်ကြည့်ကာ Rhodes ရဲ့ […]
ရှေးခေတ်က ခန္ဓာကိုယ်အစားထိုးခဲ့တဲ့ အစိတ်အပိုင်းများ တူးဖော်တွေ့ရှိမှု
10 ဘီစီ 950 နဲ့ 710 အတွင်းမှာ ဆေးပညာထိုးဖောက်မှု ခြေလှမ်းသစ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ “Cairo toe” လို့ ခေါ်တဲ့ ခြေချောင်းငယ် အစားထိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို သစ်မာသား၊လယ်သာနဲ့ ခိုင်ခံတဲ့ ကြိုးတွေတုပ်နှောင်ကာ စနစ်တကျ ခြေချောင်းအစားထိုးတဲ့ ပုံစံကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခြေချောင်းမရှိသူတွေကို ပရဟိတသဘောနဲ့ ထုတ်ပေးခဲ့ပုံရပြီး အီဂျစ်တွေရဲ့ ခေတ်ရှေးပေးတီထွင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ […]
ဥရောပရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာများ
1. ဥရောပရဲ့ ဥပဒေမှာ လက်ထပ်တဲ့အခါ အကြီးအကဲတစ်ဥိး အစိုးရ အမှုထမ်းတစ်ဦးရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ လက်ထပ်လို့ မရပါဘူး။ဒါဟာ ကိုယ်ယူမယ့် ယောင်္ကျားကို အကြီးအကဲက မဆိုးသွမ်းအောင် ထိန်းချုပ်ပေးဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုောကာက်ကာ လင်ယောင်္ကျားက ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်အောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ 2. ပိုင်ရှင်မဲ့ အလောင်းတွေ့ရင် နိုင်ငံတော်က သူ့အတွက် ဈာပနကို […]